I-Barges Transport-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>Isisindo Esindayo>Ezokuhamba Ngezimoto
Ngokuthuthuka njalo komnotho waseChina, abakhiqizi abengeziwe abakhiqizayo bathuthela engxenyeni ephakathi neyasentshonalanga yeChina. Futhi ukuphendula uhlelo lwakamuva lwebhande elilodwa ne-One Road, ukwakheka okuhle kwebhande lezomnotho laseYangtze, ikakhulukazi ngoba ezokuhamba ngomgwaqo omkhulu ngeke zikwazi ukuthutha kakhulu ama-cargos.
Amasu we-Sohologistics ukulungisa isikhathi ezinkampani, enza umsebenzi wobambiswano emfuleni waseYangtze, amadolobha asogwini futhi anikezela ngochungechunge lwezinsizakalo ezihlobene zamakhasimende asekhaya nawaphesheya kanye nabathutha izinto zempahla ukuze baqiniseke ukuthi konke ukusetshenziswa kwezimpahla zobunjiniyela kanye nokuhlelwa kwamaphrojekthi kuyaphumelela. futhi bushelelezi.
Isikebhe isikebhe esingaphansi sokwakhiwa okuyisisekelo esingaphansi, esakhelwe ikakhulu ukuthutha imifula nokuhamba ngemigwaqo yezimpahla eziningi. Kungokwalayini wezokugibela. Kungathatha amabhathana amancane ezinto eziningi zezimpahla ezisuka ethekwini elingumfula elingaphakathi enyakatho kuya echibini elinamanzi ajulile futhi kusizakale ngokudlulisela la ma-cargos amaningi emikhunjini yetrunk, emikhunjini yesitsha, ethwala ngobuningi nokunye imikhumbi yaphesheya kwezilwandle. IBarging isetshenziswa futhi lapho izikebhe zasolwandle zingafakwanga ngezinto ezisindayo noma lapho amasayithi emisebenzi futhi engatholakali ngomkhumbi olwandle noma ngomgwaqo.
Ngenxa yokuthandwa kokunamathiselwa, amabarothi aletha ama-cargos amaningi oxubekile nama-cargos e-break, ikakhulukazi kufaka phakathi amabhajethi we-Hatch uqobo kanye nama-barges we-deck uqobo.
Kwimigwaqo egatsha yaseYangtze emfuleni egijimayo, yenza ukushoda kwezokuhamba zomgwaqo kwamaloli asindayo.
Ubuchwepheshe be-SHL buhlanganisa ukukhetha osayizi begeji elifanele, amandla emphetho, isikebhe sehashi esifanele nokudonsa kanye nokuhlolwa ngaphambi kokusetshenziswa nokuqiniswa kwamandla uma kudingeka.
Barge Type ubude
(M) isisindo Gross
(MT) isisindo Net
Uhlobo Olukhulu ubude
(M) Inkomba yokulayisha isisindo
(MT) Usayizi we-cargo hatch
(L * W * D) (M) Ukujulwa kokulayishwa akukho
(M) Ukujula kokubhaliwe okugcwele
I-Yangtze river line port isetshenziswa yi-Sohologistics
Isifundazwe saseJiangxi: Jiujiang, Nanchang
Isifundazwe saseHunan: Yueyang, Changsha
Isifundazwe saseHubei: Wuhan, Huangshi, Jingzhou, Yichang
Idolobha laseChongqing: I-Chongqing
Isifundazwe saseSichuan: iYibin, iLuzhou, neLeshan
Isifundazwe saseYunnan: uShuifu
Izikejana zokuvala ukusuka emachwebeni angenhla ziye echwebeni laseShanghai, ichweba laseTaicang, iZhangjiagang, ichweba laseLianyungang, ichweba laseZhoushan, ichweba laseTianjin, ichweba laseQingdao, ichweba laseDali, ichweba laseGuangzhou, kanye nechweba laseHumen.
Uhlobo luni lwama-cargos alungele ukuthuthwa kwe-barge?
Kwama-cargos angaphezu kwe-5m noma kunzima ukudlula kumabhuloho. Zilungele ukuthutha izinto zokuhamba eziya emanzini angaphakathi ezweni noma ukuhambisa emanzini asenkabeni yezikhumulo zasogwini bese zishintsha ngqo ngemikhumbi yolwandle.
Ngabe kufanelekile ukuthuthwa kwe-barge lapho inani elikhulu lama-cargos lidinga ukuthunyelwa phesheya kwezilwandle · ukusuka ezweni kuya ngasolwandle lwaseShanghai?
Yebo, okokuqala nje, ngokubuka kwentuthuko enobungani nemvelo, izwe selikhuthaze ukusebenzisana phakathi kwamamodi amaloli kuya esitimeleni, insimbi kaloliwe ukuya emanzini ukuze inikele ekuvikelweni kwemvelo komhlaba, futhi ugcine kakhulu izindleko zezimpahla zokuhamba.
Ingabe kufanelekile ukuthutha ukuthutha kusuka eSichuan kuya eShanghai?
Ngempela yebo, kunezindawo zokugcina imithwalo esindayo yaseLeshan, ichweba laseYibin, nechweba laseLuzhou esifundazweni saseSichuan. Ama-Sohologistics azohlinzeka ngohlelo oluhle kakhulu lokuhamba kwe-cargos esindayo kumakhasimende ethu.
Kuzothatha isikhathi esingakanani kusuka echwebeni laseLeshan, echwebeni laseYibin, echwebeni laseLuzhou kuya ezikhumulweni zeShanghai Luojing?
Kusebenzisa izinsuku ezingama-8-10. Uma ngesikhathi esomile somfula weYangtze, kuzothatha izinsuku ezingeziwe ezingama-5 ukuya kwezi-10. , umugqa we-reverse uyisimo esifanayo.